Mibvunzo - FAQ - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
Zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa uye zvinotengeswa nefekitori pachayo. Kugamuchirwa kufekitori yedu kuti ushanyire.
Iri sei kambani yako simba nefekitori?
Isu tiri mutungamiri wePVC fenzi indasitiri muChina, tinogona kukupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo unokwikwidza kwazvo. Vatinoshamwaridzana navo vari pasi rese, Misika yedu mikuru ndeye North America, South America, Canada, Europe, Australia, Southeast Asia, Europe, neSouth Africa
Unogona kupa sampuli?
Tinogona kupa emahara zvidimbu zvidimbu zvecheka sampuli kuti iwe uite bvunzo Iwe unongoda chete kubhadhara yemari yekutakura. Isu tinogona zvakare kupa yakazara seti yemasampuli. Mutengo wema sampuli unozodzorerwa mushure mekunge waisa odha.
T / T, VISA, MasterCard, e-kutarisa L / C, DIA, D / P, Western Union kubhadhara. Tinogona zvakare kunyora tsamba yeinishuwarenzi odha paAlibaba, unogona kubhadhara zvakananga kuAlibaba.